Shirka nabadda Suuriya oo la isku af-dhaafay - BBC Somali
Image caption Wufuudda wada hadallada Suuriya ee Geneva
Dawladda Suuriya iyo mucaaradka ayaa aflagaaddo is-weydaarsaday kaddib markii wada hadallo nabadeed oo magaalada Geneva ka socday muddo toddobaad ah ay ku dhammaadeen iyadoo aan heshiis la gaarin.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Suuriya Walid Mucallim ayaa sheegay in mucaaradka aysan dhab ka ahayn wada hadallada halka mucaardkuna ay ku doodeen in dowladdu aysan dooneyn in dhiigga daadanaya la joojiyo.
Si kastaba ha ahaatee, ergeyga QM ee arrimha Suuirya Lakhdar Ibrahimi ayaa sheegay in wada hadallada is-afgarad laga gaaray, wuxuuna sheegay in wada xaajood dheeraad ah la qaban doono 10-ka bsiha Febaraayo.
Mucaaradka ayaa aqbalay inay ka qayb qaataan wada hadalada, balse dowladda Suuirya weli war lagama hayo.
Intii uu socday shirka toddobaadkan, labada dhinac waxa ay ka wada hadleen xaaladda bani'aadanimo iyo suurta galnimada in la joojiyo colaadda.
Waxa ay ku heshiiyeen xabad joojin maxalli ah si loogu oggolaado shaqaalaha gargaarka inay gaaraan goobaha ay colaaddu ka jirto.